Iseti yentloko ekumgangatho ophezulu ayinakukhusela iindlebe zethu ngokufanelekileyo kuphela, kodwa okona kubaluleke kakhulu, umgangatho wesandi ozisayo unokwenza iindlebe zakho zikhulelwe kwimizuzu. Kule mihla, umculo uye waba yenye yeendlela zangoku zokudodobala, kwanesixhobo soqwalaselo.
Umculo omtsha uyonwabele i-headset yentloko-S9 XR
Umculo omtsha wonwabele iseti yentloko-i-C500 kunye
Kulutsha lwanamhlanje, yintoni iseti yentloko? Iselfowuni sisibini seeyunithi zokuguqula. Yamkela isiginali yombane ethunyelwe ngumdlali weendaba okanye isamkeli, kwaye siyiguqula ibe ngamaza esandi esivakalayo sisebenzisa isithethi kufutshane nendlebe. Iseti yentloko ngokubanzi inokufumaneka kumdlali weendaba nakwikhonkco
Imodeli yokusetha i-headset eyiyo
Kulutsha lwanamhlanje, yintoni iseti yentloko? Iselfowuni sisibini seeyunithi zokuguqula. Yamkela isiginali yombane ethunyelwe ngumdlali weendaba okanye isamkeli, kwaye siyiguqula ibe ngamaza esandi esivakalayo sisebenzisa isithethi kufutshane nendlebe. Iseti yentloko ngokubanzi inokuchazwa kumdlali weendaba kwaye uqhagamshele kwiplagi. Uncedo kukuba unokumamela isandi sodwa ngaphandle kokuchaphazela abanye; okanye isandi sendalo esingqongileyo. Iirekhodi zokurekhoda, imivalo, ukhenketho, ezemidlalo, njl.
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-E500
Ukuzonwabisa kwemihla ngemihla: Kubomi bemihla ngemihla, ongenalo ulonwabo oluncinci olwabo, ukudlala iinkqubo zeTV kunye nokudlala imidlalo yinto yokonwabisa imihla ngemihla. Ukuba ufuna amava olonwabo olungcono, zitshonise kwilizwe lakho. Emva koko khetha ii-headphone ezinokugquma okungcono kwesandi. Ii-headphone ngokubanzi zinama-earmuff afanelekileyo asonga iindlebe, anokwahlulahlula ingxolo yangaphandle, azise amava okunxiba kakuhle phantsi kwesiseko sokunciphisa ingxolo, kwaye azise ingqalelo ekusebenziseni.
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-E300
Izicelo ezithile ezibandakanyekayo kwiintloko zentloko ezingenazingcingo zeshishini zibandakanya le miba ilandelayo: ukwakhiwa kwesiza njengezixhobo zokuphakamisa ngaphezulu, abasebenzi beenqwelomoya, ishishini lefandesi, ukhuseleko lomlilo, ukuhlola ipetroleum kunye nokumbiwa kwemigodi, kunye nokusebenza kwezixhobo ezinkulu zorhwebo, uqeqesho kunye nezinye izihlandlo. Ezi zihlandlo ngokubanzi zinezi zinto zilandelayo: kunokubakho umngcipheko othile, okanye iimpazamo zomsebenzi ziya kuzisa iziphumo ezingalindelekanga, ulwazi luluqonda ...
Ii-headphone sisixhobo sokuguqula i-electro-acoustic esiguqula imiqondiso yombane yesandi sibe sisandi. Kukho iindlela ezimbini zamashaneli kunye neendlela ezininzi kubugcisa bangaphambili, nangona zinesandi kunye nomfanekiso ocacileyo. Kodwa zisasazekile emgceni okanye kwinqwelomoya, inkqubo yestereo epheleleyo kufanele ukuba ibe sisandi esingqonge isandi esiqukethe indawo enamacala amathathu. Isitiriyo esinemilinganiselo emithathu siyadluliselwa size siveliswe yinkqubo yamajelo amane. Ngeli xesha, izithethi ezine kufuneka b ...
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-R200
Yintoni i-headset yokunyaniseka okuphezulu? Eyona ntsebenzo iphambili yeseti yentloko ethembekileyo ekucetyiswa ngayo kwiKhomishini ye-Electrotechnical ye-IEC581-10 uxwebhu yile: uluhlu lwefrikwensi alukho ngaphantsi kwe-50Hz-12500Hz, kwaye eyona mpendulo ilungileyo ye-headset yangoku imalunga ne-5-45,000Hz; Impazamo evumelekileyo yempendulo eqhelekileyo yokuhamba rhoqo ichanekile kwaye ayilunganga i-3dB; Ithambeka lekhefu lokuphendula rhoqo aligqithi kwi-9dB nge-octave nganye; ngaphakathi kwe-250Hz-800Hz, umahluko ube ...
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-R400
Emva kokuba iseti yentloko isesandleni, kufuneka siqale sidumise iseti yentloko. Ngesi sizathu, ndiyakholelwa ukuba wonke umntu uya kuyazi ukuba anditsho. Singayonwabela emva kwenkqubo eyenziweyo, kodwa ayisiyiyo yonke into ehamba kakuhle okoko kuqhwatyelwa izandla? Impendulo nguhayi, umgangatho wee-earphone ezintle kakhulu, kuba sihlala sisebenzisa ii-earphone zethu esizithandayo size sife ngaphambi kwexesha kuba asilumkanga xa sisisebenzisa! Nazi iimeko eziqhelekileyo kwinkqubo yokulungisa ii-headphone, kwaye ndiza kukunika ...
Umculo omtsha uyonwabele i-headset ye-headset-R600